नवराज सिलवाललाई उदयशमशेर राणाको जवाफ, मलाई एउटा विवादास्पद पूर्वप्रहरीले चिनाइराख्नु पर्दैन – Medianp
नवराज सिलवाललाई उदयशमशेर राणाको जवाफ, मलाई एउटा विवादास्पद पूर्वप्रहरीले चिनाइराख्नु पर्दैन
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: सोमबार, मङि्सर ११, २०७४०७:०३
“उदयशमशेर तरुण दलको केन्द्रीय अध्यक्ष, निर्वाचित सांसद, अहिले अर्थराज्यमन्त्री भएको मान्छेलाई एउटा विवादास्पद पूर्वप्रहरी अधिकारीले चिनाइराख्नुपर्दैन । २०४८ सालदेखि आजका दिनसम्म ललितपुर १ का जनतासँग भिज्दै आएको उदयशमशेरलाई मैले चिनाएँ भनेर उनले आफूलाई ‘जोकर’ का रूपमा प्रस्तुत गरे । आज मेरो क्षेत्रका जनताहरूले उनलाई नै गिज्याइरहेका छन् ।”
ललितपुर १ मा नेपाली कांग्रेसबाट उदयशमशरेर राणा र एमालेबाट नवराज सिलवाल प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनेका छन् । चार वर्ष सांसद भइसकेका राणालाई भर्खर राजनीतिमा प्रवेश गरेका सिलवालले ‘मेरै कारण उदयशमशेर चिनिएको हो’ भनेर भाषण गरेपछि यो विषय विवादमा परेको छ । आफ्नो चुनावी प्रचार, चुनावको एजेन्डा, वाम गठबन्धनको प्रभावबारे राणासँग गरिएको कुराकानीको अंश :
० राजनीतिको सुरुवात कसरी भयो ?
– पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति थियो । बुबा सक्रिय राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो । ठूलो बुबा भरतशमशेरदेखि हाम्रै परिवारको सुवर्णशमशेर पनि बीपीको राजनीतिक सहकर्मी हुनुहुन्थ्यो । पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक भए पनि म भने प्रत्यक्ष संलग्न थिइनँ । सानैदेखि बाहिर पढेका कारण राजनीतिलाई नजिकबाट बुझ्ने अवसर पाएको थिइनँ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन हुनु केही समयअघिको कुरा थियो । एक दिन बुबाले बाहिर घुम्न जाऔं भन्नुभयो । बुबाले मलाई पुतलीसडकमा रहेको एउटा घरमा लैजानुभयो । मलाई भुइँतलामा छाडेर उहाँमाथि जानुभयो । त्यो त नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालय रहेछ । भुइँतलामा म बसेको कोठामा दुईजना हुनुहुन्थ्यो । चिनजान गर्ने क्रममा एकजना बालकृष्ण खाँण र अर्काे अर्जुन थापा हुनुहुँदो रहेछ । म त्यतिबेला दिल्ली विश्वविद्यालयमा पढ्थें । उहाँहरूले मलाई राजनीतिमा आउन एक खालको उत्प्रेरणा दिनुभयो । त्यसपछि एउटा खाम मलाई दिइयो, खोलेर हेर्दा त्यसमा लेखिएको थियो, तपाईलाई नेविसंघ दिल्ली विश्वविद्यालयको अध्यक्षमा मनोनीत गरिएको छ । यहीँबाट औपचारिक रूपमा राजनीतिमा लागेको हुँ ।
० वाम गठबन्धनले चुनावी परिणामलाई असर पार्दैन?
त्यसमा पनि यसपटक एमाले र माओवादीमा रहेर दशकौंदेखि राजनीति गरिरहेका स्थानीय साथीहरूलाई पन्छाएर एकजना विवादास्पद व्यक्तिलाई सुटुक्क टिकट दिइएपछि त्यहाँभित्र व्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ । राजनीतिमा कुनै पनि योगदान नभएको र स्थानीय क्षेत्रमा कुनै पनि विकासका काममा योगदान नभएको व्यक्तिले टिकट पाएपछि मलाई झन् जितका लािग सहज भएको छ । त्यसैको परिणाम अहिले दिनहुँ एमाले र माओवादी त्यागेर कांग्रेस प्रवेश गर्नेहरूको लर्काे लागेको छ मेरो क्षेत्रमा ।
० तपाईको प्रतिस्पर्धी नवराज सिलवालले त मैले गर्दा उदयशमशेर चिनिएको छ भन्ने गरेका छन् नि ?
– राजनीतिक र गैरराजनीतिक व्यक्तिमा फरक भनेको नै यही हो । जो (नवराज सिलवाल) मसँग आज चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्, उनी राजनीतिक व्यक्ति होइनन् । उनमा राजनीतिक संस्कार नै छैन । उदयशमशेर राणा २०४८ सालदेखि ललितपुरका प्रत्येक कुनाकाप्चा पुगेको छ । मेरो बुबा चुनाव लड्दा तीनैपटक म उहाँसँग प्रत्येक गाउँगाउँ पुगेको थिएँ । म आफैं २०६४ सालमा चुनाव लडेर थोरै अन्तरले पराजित भएँ ।
२०७० सालमा फराकिलो अन्तरले मलाई त्यहाँका जनताले विजयी गराए । उदयशमशेर तरुण दलको केन्द्रीय अध्यक्ष, निर्वाचित सांसद, अहिले अर्थराज्यमन्त्री भएको मान्छेलाई एउटा विवादास्पद पूर्वप्रहरी अधिकारीले चिनाइराख्नुपर्दैन । २०४८ सालदेखि आजका दिनसम्म ललितपुर १ का जनतासँग भिज्दै आएको उदयशमशेरलाई मैले चिनाएँ भनेर उनले आफूलाई ‘जोकर’ का रूपमा प्रस्तुत गरे । आज मेरो क्षेत्रका जनताहरूले उनलाई नै गिज्याइरहेका छन् ।
– जो व्यक्ति तीन दशकदेखि निरन्तर त्यो क्षेत्रको विकासमा सक्रिय छ, त्यहाँका जनताको सुख–दुःखमा सँगसँगै छ, त्यो व्यक्ति टाढाको हुने अनि जो आज एकाएक टिकट लिएर राजनीतिमा आउँछ, जसको त्यहाँ कुनै योगदान छैन, भूगोल त्यहाँका समस्या, सम्भावना, स्थानीयलाई चिन्दैन अनि त्यो व्यक्तिले यस्ता कुरा गरेको सुहाउँछ ? हिजो मसँग चुनाव लडेका विपक्षी साथीहरूले समेत यस्ता कुरा गरेका थिएनन् । तर अहिले मेरो प्रतिस्पर्धीले सतही कुरा गरेर आफ्नो राजनीतिक करियर सुरुमै कमजोर भएको पुष्टि गरेका छन् ।
जहाँसम्म म राणा परिवारको कुरा छ, प्रजातन्त्रका लागि लड्दा दुःख पाएको राणा परिवारको सदस्य हुँ । पञ्चायतविरुद्ध उभिँदा मेरो परिवारले पाएको दुःख हामीलाई थाहा छ । मेरो बुबा सागरशमशेरलाई नचिन्ने सायदै होलान्, मेरो ठूलोबुबा भरतशमशेरले प्रजातन्त्रका लागि बिनासर्त आफ्नो पार्टी नै कांग्रेसमा विलय गराएका थिए । सुवर्णशमशेरका बारेमा मैले धेरै भनिराख्नुपर्दैन । त्यसकारण राजनीतिको ‘र’ पनि नबुझेका र राजनीतिक संस्कार नभएकाले जनतामा भ्रम फैलाउन यस्ता कुतर्क गर्छन् । त्यसले मेरो राजनीतिक दौडमा कुनै अप्ठेरो पार्दैन ।
० चुनाव आउन एक साता बाँकी छ, दौडधूप कस्तो छ ?
– म राजनीतिमा लागेको अरु कुनै स्वार्थले होइन । राजनीतिमार्फत देश र जनताको सेवा गर्नु नै मेरो ध्येय हो र म त्यसैका लागि सधैं लागिपरेको छु । राजनीतिबाहेक मसँग धेरै विकल्प थिए । परिवारको व्यापार मात्र होइन, म अमेरिकामा राम्रो जागिर छाडेर राजनीतिमा आएको हुँ । त्यसकारण म राजनीतिमा आउनुको एउटै कारण समाजको विकास र समृद्धि नै हो ।
– जनताका अपेक्षा धेरै छन् । तर राज्यसँग सीमित स्रोत छ । त्यसकारण एकैपटक सबै जनताका माग सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने होइन, तर मैले चार वर्षमा जे जति काम गरें, गर्न सकें त्यसप्रति जनतामा निराशा पक्कै छैन । चार वर्षमा मैले आफ्नो व्यक्तिगत पहलमा होस् या अन्य विभिन्न सरकारी गैरसरकारी संघसंस्थामार्फत धेरै काम भएका छन् । कतिपय काम बहुवर्षीय हुन्छन्, आजको भोलि सम्पन्न हुँदैनन् । अझै धेरै गर्नुछ, त्यसैले पनि म यतिबेला जनताका बीच विकासका कामलाई अझै तीव्रता दिन र थप विकास गर्न मलाई मतदान गर्नुहोस् भनिरहेको छु ।
० मतदाताहरूको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभएको छ ?
गुल्मीमा कांग्रेसको चुनावी गाडीलाई लक्षित गर्दै बम विस्फोट
तेस्रो काठमाडौं सर्ट फिल्म फेष्टा आउँदो पुसमा
प्रधानमन्त्री ओली यी ६ मन्त्रीसँग छन् रुष्ट, अब पनि नसच्चिए हटाइने, को को परे ?
कांग्रेस नेता गगन थापाले भने–मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लुकाउनु संविधान विपरित हो
के सरकारले नै क्रिस्चियन धर्मको सम्मेलन गर्न मिल्छ ? माधव नेपालदेखि एकनाथ ढकालसम्म क्रिस्चियन मेसिनरीमा सक्रिय
डेढ महिनाभित्रै ओलीका तीन मन्त्री पुगे बेलायत, भिसा च्यातिएकाले रवीन्द्र अधिकारी जान पाएनन्, मनलाग्दी विदेश भ्रमण रोक्ने कसले ?
बोल्ने ठाउँ नभएपछि सामाजिक सञ्जालबाटै स्थायी कमिटीको बैठक राख्न माग गर्दै नेताहरू, योगेशपछि भीम रावल पनि थपिए